Maqaal: Imaaraadka oo ka guuraya Soomaaliya - Latest News Updates
Maqaal: Imaaraadka oo ka guuraya Soomaaliya
Dawladda UAE ayaa la xaqiijiyey inay diyaar garow ugu jirto inay ka guurto Somalia oo ay albaabada u laabto Safaaradeeda Muqdisho iyadoo gebi ahaana ay joojin doonto hawlihii kale ay ay qaban jirtay.
Arintan ayaa timid kadib markii uu xumaaday Xiriirka labada dhinac wixii ka dambeeyey Lacagtii UAE ee ay qabatay Dawladda FS iyadoo ay Imaaraadku sheegayaan in Si xushmad darro ah loola dhaqmay, iyagoo saxaafada u sheegay in Madaxdii Safaarada Ay ciidamo somali ah Qoryo ku qaado qabteen halka Uu Saadaq Joon dharbaaay Duuliyihii Diyaarada lacagta Keentay markii uu Saadaq Joon sidaa samaynayey waxaa Garoonka ku sugnaa Wasiirka Gaadiidka, Taliyaha milatariga, Taliyaha Booliska iyo Taliyaha Dugsiga Gen Gordon waa General kahiye luga God.
Dhinaca kale waxaa la filayaa Todobaadka soo socda in Dalalka Sacuudiga. Masar, Baxayn iyo UAE ay si Wadajir ah u soo saaraan War murtiyeed ka dhan ah Dawlada FS.
Hasa yeeshee Wasiirka Amniga Ducaale ayaa xilligaa Telka Dansaday bacdamaa uu Guryo iyo Hanti kale uu ku leeyahay Imaaraadka.
Wararka la helayo ayaa xaqiijinaya in UAE ay Gaadiidkii iyo qalabkii kale ee ka yaalay Magaalada Muqdisho loo diyaariyey in la raro haddii uusan iman xal kale oo ah in Dawlada FS ay raali gelin iyo Cudurdaar ka samayn ficilidii ay geysteen iyo Lacagta oo ay dib u soo celiyaan.
Hawlihii ay UAE ka qaban jirtay Somalia.
Dawladda UAE ayaa Hawlo kala gedisan ka taageeri jirtay Dawladda Somalia haba ugu badnaadeen dhanka Taakulaynta Ciidamada waxaana ku bixi jiray qarash badan.
Ciidamada ay Mushaarka siiso UAE ayaa ku kala sugan Somaliland, Puntland, Jubaland iyo Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa Ciidamada ay UAE u tababareen Dawladda Somalia Mushaarkoodana ay bixiyaa laga soo bilaabo sanadkii 2014 ayaa tiradoodu waxa ay tahay 1400 Askari oo 650 ka mid ah ay yihiin Kumaandoos mushaarna u qaata 450 Dollar iyo Raashin ka gooni ah Mushaarka, halka 750 Askari oo Ciidanka caadiga ah la siiyaa Mushaar dhan 350 Dollar iyo Raashin.
Raashinka ciidanka Muqdisho jooga ayaa bil kasta Lagu bixiyaa Hal Milyan iyo Todoba boqol Kun Dollar (1,7,000,000).
Puntland waxaa ku sugan 3000 Askari iyadoo hawshaasi Dawlada UAE halkaa ka bilowday sanadkii 2007, Kismaayo waa markii ugu horeysay waxaana tababar u soo dhamaaday 600 Askari.
Hawlaha kale ee uu hakadka uu ku iman doono waxaa ka mid ah dhismaha Xerada Damaanyo oo gebagebo maraya oo loogu talagalay in Ciidanka lagu tababaro Xerada Gen. Gordan la keeno halkaa, Sidoo kale waxaa joogsan doona Dhismaha lixda Dabaq ee Isbitaalka Sheikh Zayed ee Degmada Cabdicasiis oo dhismihiisu uu marayo heer Gebagebo ah.
LA soco qaybta labaad ee warbixintan
Imaaraadka oo ka guuraya Soomaaliya.Dawladda UAE 🇦🇪 ayaa la xaqiijiyey inay diyaar garow ugu jirto inay ka guurto…
Posted by Abdi Mohamed Ismail on Thursday, April 12, 2018